Dagaalada Mosul oo dhibaato ka abuuri kara Iswiidhan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ciidamada Ciraaq oo soo gaaray magaalada Mosul. sawir: Khalid Mohammed AP/TT
Dagaalada Mosul oo dhibaato ka abuuri kara Iswiidhan
Dagaalada Mosul oo xataa walwal ka abuuri kara dalkaan Iswiidhan
La daabacay onsdag 2 november 2016 kl 13.53
Isuduwaha ka hortagga rabshadaha iyo argagaxisada ee magaalada Göteborg Zan Jankovski ayaa digay in dagaalka Mosul qatar ka abuuro Sweden.
Warqad uu soo saarey isku duwaha ayuu kaga digey in dagaalada ka socda magaalada Mosul ee dalka Ciraaq ay siyaadin karaan khataro iyo dhibaatooyin ka dhex abuurma dadka goobahaas lagu hardamayo ka yimid ee ku nool dalkaan Iswiiidhan.
Zan Jankovski ayaa isagoo arrinkaas ka hadlaya waxa uu yiri sidan soo socota:
- Innagoo og waxyaalaha ka dhacaya magaalada Mosul iyo waliba goobaha kale oo ay ku amar kutaagleeyaan kooxda Daacish, ayaa sida ay nala tahay waxaa fiicnaan laheyd in hey’adaha kala duwan ee magaaladu u hawlgalaan, waxna ka qabtaan sidii raad loogu yeelan lahaa qoysaska asal ahaan goobahaas ka soo jeeda, ayuu yiri Zan Jankovski oo ah isuduwaha ka hortagga argagixisada iyo gacan ka hadalka magaalada Göteborg.
Isuduwaha ayaa waraaqdaan u qorey dhammaan hay’adaha ka shaqeeya ka hortagga danbiyada.
Magaalada Göteborg ayaa waxaa ku nool qiyaastii dad gaaraya 11 000 oo qof oo ka yimid dhulalkaas dagaaladu ka socdaan, waxaana goobahaas lagu dagaalamayo dadka dalkaan dagan u jooga qaraabo iyo ehel taas oo khalkhal galin karta nabadda iyo wada noolaashaha magaalada Göteborg.